1। Nootropics र Sunifiram के हो?
2। सनफिरम कसरी काम गर्दछ?
3। सुनीफिरम को पांच संभावित लाभ
4। सनफिरम कसरी प्रयोग गर्ने
5। Sunifiram Stack
6। सनफिरम को साइड इफेक्ट क्या हो
7। सनफिरम कसले प्रयोग गर्न सक्छ
Nootropics र Sunifiram के हो?
के तपाई मेमोरी, फोकस, र आविष्कारिताको सन्दर्भमा ठूलो सम्भावनालाई हटाउने बारे सोच्नुभएको छ? कहिलेकाहीं तपाईं आफ्नो परीक्षा इक्का गर्न सक्नुहुन्छ तर महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं आधी रातको तेल जलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। राम्रो कुरा हो, अब तपाईं सजिलै संग तपाईंको संज्ञानात्मक क्षमता को छोटो समयमा भित्र गर्न सक्नुहुन्छ। प्रविधिको आगमनको साथ, तपाइँ पहिला उत्पादन गर्ने बारेमा थप जान्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाइँ मस्तिष्कले काम गर्ने तरिकामा सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँले प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुपर्छ nootropics। नोटोट्रिक शब्द "नोस" र "ट्रोपोस" बाट आउँछ, क्रमशः मस्तिष्क, परिवर्तन वा परिवर्तन गरिएको हो। तिनीहरू राम्रा औषधिको रुपमा चिनिन्छन् जुन एक संज्ञानात्मक कार्यमा सुधार गर्दछ। वर्षौंको लागि, नोटोप्रोपलाई तीव्रता बढाउन र मानसिक क्षमतालाई नाटकीय रूपमा प्रभाव पार्न ज्ञात गरिएको छ।
Nootropics काममा आउँदछ, विशेष गरी जब तपाइँ सन्तुलनमा फाँट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंलाई खडा गर्न को लागी केहि आवश्यक पर्दछ। व्यवसायी व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू, र समेत लडाकुहरूले आफ्ना किनारा पत्ता लगाउनको लागि कहिल्यै नोटोट्रिक प्रयोग गरे। त्यसभन्दा बढी, नोट्रोपिकहरू मोटर प्रकार्य विकार जस्ता ह्यान्टिंगटनको, पार्किन्सन, एडीएचडी र अल्जाइमर बीउबाट पीडित रोगहरूमा उपयोगी हुन थालेका छन्।
उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्ने नोटोपिक्स मध्ये एक हो सुनीफिरम, जुन DM-235 को रूपमा पनि जान्छ। यसको ढाँचा racetam नोट्रोपिक्स को समान छ तर piracetam भन्दा बढी हजार गुणा बढी छ। सनफिरमको आधा-जीवन एक देखि दुई घण्टा हो।
यो नोटोट्रिक पहिलो वर्ष 2000 मा वैज्ञानिकहरु द्वारा इटाली मा फर्मेन्ज विश्वविद्यालय बाट उत्पादन गरिएको थियो। यो व्यापक रूप देखि अनुसन्धान गरिएको छैन, तर प्रारम्भिक पशु अध्ययनले गर्दा यो देखाउँछ कि यो एक अति प्रभावकारी न्युटोप्रोक हो जसले पनि न्यूरोलॉजिकल विकारहरूको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
सनफिरम कसरी काम गर्दछ?
हुनत सुनीफिरम एक पिरासिटाम डेरिभेटिभ मानान्छ, यसको ढाँचा racetams को तुलना मा फरक छ। यो एक नै रासायनिक वर्ग मा वर्गीकृत piperazine alkaloid को रूप मा वर्गीकृत छ।
यद्यपि यसको तन्त्रणा पूर्णरूपमा बुझ्न सकिँदैन, यो ग्लुटेमेट रिसेप्टर गतिविधिको उत्तेजना मार्फत काम गर्न जान्छ। यसले acetylcholine को उत्पादन र रिलीज पनि बढाउँछ, जो सिक्न न्यूरोट्रांसमीटर हुन्छ।
Sunifiram को कार्यविधि को प्राथमिक तंत्र को एम्पैकिन को लागी मानिन्छ। यसको मतलब यो हो कि एक चोटि यो रगत दिमाग को बाधा को पार गर्दछ, यो तब दिमाग मा मिलयो AMPA प्रकार को प्रकार ग्लूटामेट रिसेप्टर्स संग बाँध्छ। नतिजा, ग्लुटेमेट को उत्पादन को उत्तेजना छ, जो एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर हो र जसको भूमिका तंत्रिका सक्रियता हो।
ग्लूटामेट एक उत्तेजना न्यूरोट्रांसमीटर जसको भूमिका synaptic plasticity को बढावा छ। यसको अर्थ यो क्रियाकलापमा वृद्धि वा कमीको प्रतिक्रिया गर्न तंत्रिका सिंकहरू क्षमता बढ्छ।
शरीर को ग्लूटेमेट को पर्याप्त स्तर को आवश्यकता हुन्छ ताकि न्यूरोन्स को बीच संकेत शक्ति मा दीर्घकालिक आशंका या बल्कि एक स्थायी सुधार हुन सक्छ।
साथै, हिप्पोकैम्पसमा ग्लुटेमेट स्तर आवश्यक छ, जसको दिमागले स्थानिय नेविगेशनलाई अनुमति दिन्छ। यो मेमोरीको गठन र भण्डारणको लागि पनि प्रदान गर्दछ। यो मानिन्छ कि सुनीफिरम को संज्ञानात्मक कार्य को बढाने को क्षमता हिप्पोकम्पस मा तंत्रिका संकेत शक्ति मा सुधार को रूप मा हो।
मेमोरी गठन र सम्झना बढाउने भन्दा बढी, एपाकक्सहरूले हल्का उत्तेजना प्रदान गर्छन् जसले सतर्कता र ऊर्जा बढाउन मद्दत गर्दछ। सौभाग्य देखि, यो बेपत्तापन को कारण छैन, र अन्य दुष्प्रभावहरु को उत्तेजनाहरु जस्तै एम्फेटामिन, मेथिलफेंनिडेट (रतनिना) र क्याफिन को उपयोग को बारे मा ल्याईयो।
साथै, Sunifiram उत्पादन र एसिटिलोकलिन को रिलीज गरेर cholinergic रूपमा कार्य गर्दछ। Acetylcholine सिक्नको गति र क्षमता, मेमोरी, र सिक्न व्यवहारमा निर्भर बिना अद्वितीय समस्याहरू समाधान गर्न क्षमता सहित अधिकांश सिग्नेशन पहलहरू असर गर्छ।
यद्यपि यो थाहा छैन कि कसरी सुनीफिरम एसिटिलोक्लिनको उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्दछ, एक इटालियन पशु अध्ययनले देखाएको छ कि DM235 एउटै कोलोनर्किक प्रभाव थियो पिरासेटिमको रूपमा।
सुनीफिरम Adderall बनाम
सनफेरम बनाम एडिडरलले नेरिपिनफेरिन र डोपामिनको रिहाईलाई उत्प्रेरित गरेर काम गर्ने एडडरल मेकिनेम धेरै फरक छ, जसले बारीमा एक फोकस बढाउँछ र शारीरिक र मानसिक उत्तेजना पनि बढाउँछ।
अर्कोतिर सुनीफिरम, ग्लुटेमेट रिसेप्टरहरूद्वारा काम गर्दछ र यसैले मेमोरी निर्माण बढाउँछ।
सुनीफिरम को पांच संभावित लाभ
सबैलाई एक सन्तुष्ट यौन जीवन पाउन योग्य छ। यद्यपि आनन्दित सेक्स यौन चीज हो जसले जीवनमा जीवनको लागि आनन्द उठाउनुपर्छ, यो सबैको लागि मामला नहुन सक्छ।
केही मानिस मूडमा हुन सक्दछन् सबै समयका लागि यो समय समयमा समय उचाइ हुन सक्छ। A कम सेक्स ड्राइव तपाईं भावनात्मक रूपमा पीडित गर्न र आफ्नो सम्बन्धलाई पनि असर पार्न सक्छ। सौभाग्य देखि, कुनै पनि सेक्सन ड्राइव कसरी कम हुन सक्छ हुन सक्छ, त्यहाँ मद्दत छ।
एक सरल तरीका जसको तपाईं आफैले आफैले आफैं संग केहि राम्रो समय चाहन सक्नु हुन्छ सनफिरम लिन को लागी। यही कारणले गर्दा यो चालले तपाईंलाई जस्तै महसुस गर्दछ कि तपाई आफ्नो पार्टनरको विरोध गर्न सक्नुहुन्न। पुरुष र महिला दुवै मा एक अध्ययन गरे कि एक Sunifiram फायदे मध्ये एक छ कि यो यसलाई एक प्रभावकारी प्रभाव प्रदान गर्न को लागी यो प्रभाव प्रदान गर्दछ।
यद्यपि यसलाई अझै लिगिडामा वृद्धिको कारणले कसरी पहिचान भएको छैन, केहि सिद्धान्तहरूले सुझाव दिन्छ कि यो रगत र योनि खूनको प्रवाहमा वृद्धि हुन्छ।
साथै, सुनीफिरम पाउडर छुट्याउन एक बढी संवेदनशील, थर्म्याण्ड बढाउन र मस्तिष्कमा अधिक डोपामिन र Serotonin (महसुस गर्न राम्रो रसायन) को रिहाईलाई उत्प्रेरित गरी एक यौन जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ।
दृश्य र अवधारणात्मक वृद्धि
आज हाम्रो थकान थकानको कारण भिजुअल समस्याहरूको सामना गर्न सम्भव छ। साना संख्यामा र तस्बिरहरू सानो स्क्रिन, टेलिभिजन, र टिभीहरूमा पनि योगदान गर्न सक्दछ। घोडा अझै पनि केहि उपचार हामी हाम्रो लागि धेरै सजिलो नहुन सक्छ, खास गरी जब तपाईं अहिले चौंका लागी लाग्न बाध्य हुनुहुन्छ।
राम्रो दृष्टि आवश्यक छ किनकी यो एक प्रदर्शन को सुधार मा एक लामो तरिका मा जान्छ। यदि तपाईंको दर्शन शीर्ष आकारमा छ भने, तपाईं प्रायजसो परिवर्तनहरू देख्न जाँदै हुनुहुन्छ र ती तीव्र प्रतिक्रियाहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। के तपाईंले सोचेको छ कि तपाईले आफ्नो दृष्टिलाई चश्मा लगाउने बिना प्रभाव पार्ने र प्रभावकारी गम्भीर आँखालाई हानिकारक बनाउन सक्नुहुनेछ बिनाको दृष्टि बढाउन सक्नुहुन्छ?
सुनीफिरमले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई उज्ज्वल दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ जसले प्रकाश र अन्धकारलाई थप स्पष्ट बनाउँछ। यो पनि रंगहरू जीवंत रूपमा देखा पर्दछ।
अरूको लागि, सुनीफिरम पाउडर (314728-85-3) संगीत र अधिक मानसिकता संलग्न गर्न र एक भावनात्मक सन्तुष्टि दिन को लागी रिपोर्ट गरिएको छ।
यो मूड र ऊर्जा बूस्टर हो
के तपाईंले आफैंलाई तल, बेईमानी, नीलो, वा अप्राकृतिक मूडमा भेट्नुभयो? के तपाईलाई जस्तै महसुस गर्नुभयो? कम ऊर्जा स्तर तपाईलाई तान्दै हुनुहुन्छ र कफी कफी वा ऊर्जा पिउने पनि तपाईंलाई लिफ्ट जस्तो लाग्छ? यदि तपाईं यस माध्यम जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले खाडीमा सुचारु राख्न राख्न सनफिराम प्रभावको प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
सनफिरम प्रयोग गर्ने प्रतिभागिहरु ले भने कि यसले आफ्नो ऊर्जामा थपे र तिनीहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोण दिए। त्यहाँ त्यहाँ ऊर्जा हुन, मस्तिष्कले ग्लुकोजको प्रयोग गर्दछ जुन प्रायः रगतका खण्डहरूद्वारा आपूर्ति गरिन्छ। सेल झिल्लीमा ग्लूकोजको प्रवाह बाधा गर्ने औषधी मध्ये एक पेन्टोबारब्याटल हो। एक कम सुनीफिरम खुसीले पनि त्यस्तै प्रभाव देखायो।
उच्च खुराकमा, यो रातो रगत कक्ष छोडेर ग्लुकोजलाई रोक्न। यसैले कम सावधानीमा उपयोगी छ किनभने यसले ग्लुकोजको जगेडा बढाउँछ।
यसले ध्यान, प्रेरणा र मानसिक स्पष्टतामा सुधार गर्छ
हामी एक संसारमा बस्छौं जुन धेरै कुराहरू द्वारा सीमित छ। कहिलेकाँही उनीहरूले हामीलाई वजन घटाएर हामीलाई ध्वस्त पार्न सक्छन्। हरेक दिन उठ्नुको भ्रामक, एकदम लम्बा समयमा र त्यही काम गरिन सक्छ हामीलाई विलम्ब गर्न सक्छ। जबकि बलियो प्रेरणा र फोकस सबै कामहरू मा आवश्यक आवश्यक छ, जुन प्राप्त गर्न सक्दछ, तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सजिलो नहुन सक्छ।
मा धेरै सल्लाह तपाईं कसरी आफ्नो फोकस सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र एकाग्रता वेबको वरिपरि दिइएको छ। जब तपाईं अनिश्चित हुन सक्नुहुनेछ जुन तिनीहरूमध्ये एक उद्धार गर्दछ, तपाईले पनि सुन्निरामम प्रभावको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ।
Sunifiram को लाभ मध्ये एक छ कि यसले एकाग्रता, फोकस, र मानसिक स्पष्टता बढाउँछ। यसले सफल ह्यान्डलिंग र मानसिक कार्यहरूको उपलब्धिको लागि आवश्यक प्रेरणा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यो हुन सक्छ किनकि सुनीफिरम न्यूरोट्रान्समिटर एसिटिल्चोलिनको उत्पादन बढाउँछ, जसको भूमिका संज्ञानात्मक क्षमतालाई बढावा दिने हो।
सिक्न र मेमोरी बढ्छ
जबकि धेरै विश्वास गर्दछ कि तपाईं एक पुराना कुत्ता नयाँ चालहरु सिकाउन सक्दैन, यो तपाईंको दिमागमा जब यो मामला हुन सक्छ। कुनै पनि कुरा छैन तपाईंको आयु, तपाईंको दिमागले मेमोरी र मेमोरी गर्न सक्छ जब यो मेमोरी र सिकाउने क्षमतामा आउँछ। दायाँ पूरकसँग, तपाइँ नयाँ चीजहरू सिक्ने साथै आफ्नो मेमोरी सुधार गर्न क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ।
पशु अध्ययनले देखाएको छ कि सुनीफिरमले एक सिक्का गति र सूचना अवधारणलाई पनि सुधार गर्छ। सिकाउने कार्यहरूमा प्रदर्शन बढाउन भन्दा बढि, यो प्रभावकारी ढंगले रासायनिक प्रेरित प्रेरित अन्डोनिया उल्टियो। स्वस्थ वयस्कमा भएको अध्ययनले देखाएको छ कि साना खुराकहरूमा पनि यो मेमोरी र सिक्किम बढाउन अझ उपयोगी छ।
एक Sunifiram प्रयोगकर्ताले XIUMXmg चार गुणा साप्ताहिक चार महिना को लागि एक Sunifiram खुराक को प्रयोग पछि पन्द्रह बिन्दुहरु को आफ्नो IQ वृद्धि भयो।
यो दुखाइ संवेदनशीलता घटाउन सक्छ
एन्जिरेमिक प्रभावले गर्दा सुनीफिरमले यसको रूपमा काम गर्दछ पीडा रिलीवर र यो सुन्दरता यो कुरामा आउँछ कि यो अवसाद र चिन्ताको पक्ष प्रभावको साथ आउँदैन कि अन्य दुखाइ रहिरहने कारणहरू।
चिसोमा राखिएको अनुसन्धानले बताएको छ कि सुनीफिरम पूरकले तापक्रममा उनीहरूको प्रतिक्रियालाई विलम्बित गर्दछ, जसले यो नोट्रोट्रिकले गुणलाई दुरुपयोग गर्दछ। यस प्रभाव को Sunifiram खुराक (0.01 मिलीग्राम / किग्रा) मा चोटी मा मनाईएको थियो एक उच्च, वा कम खुराक हुनेछ कम प्रभावकारी।
सनफिरम कसरी प्रयोग गर्ने
सनफिरम आज बजारमा सबैभन्दा बलियो नोटोप्रोक्स मध्ये एक छ र यसैले, धेरै सावधानीपूर्वक लिन सकिन्छ। किनकि यो राम्रो तरिकाले अध्ययन गरिएको छैन किनकि, दायाँ खुट्टासँग उठाउन गाह्रो छ। तथापि, एक कम खुराक को बनाए राखन को लागि, खासकर यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रायः यो पाउडर फाराममा आउँछ, र सुनीफिरम खुवाउने सुरूवात गरिएको सामान्यतया 3mg दिन 4mg ले तीन पटक लिएको छ।
सामान्यतया, त्यहाँ दुई भिन्न तरिकाहरू छन् जसमा तपाईं सनफिरम पाउडर लिन सक्नुहुन्छ; तपाईं यसलाई केहि पानी संग मिश्रण गर्न सक्नुहुनेछ वा यसलाई क्रमशः लिनुहोस्। यदि तपाइँ आफ्नो जिब्रोमा राख्नुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो जिब्रोको बिरुद्ध बलियो सांस टकसाल राख्नुभन्दा एक सानो अनुहार वा टिंगलिंग सनसनीलाई ध्यान दिनुहुनेछ।
स्वदेशी खुराकहरू छिटो र दृढ रूपमा काम गर्न साबित भएका छन्। तपाईं एडडरल जस्तै उत्तेजक प्रभाव महसुस गर्नुहुँदा यो पूरै प्रभावले असर पारेको छ।
एकपटक तपाईले अनुभवी Sunifiram प्रयोगकर्ता बन्नु भएको छ भने तपाईले खुट्टा बढ्न सक्छ 5mg वा 8mg लाई क्रमशः। त्यो औसत खुसी हो जुन अनुभवी प्रयोगकर्ता ले लिनु पर्छ। तपाईंको खुराक बढाउनु भन्दा पहिले, तपाइँले कम खुराकहरूमा एक हप्ता भन्दा बढीको लागि नोटोट्रिक लिनुभएको छ।
तपाईं एक दिन 10mg भन्दा बढी हुनुपर्दछ किनभने सनफिरमको लामो समयको प्रभाव अझै अध्ययन गरिएको छ। साथै यो एक लामो लामो अवधिको लागि एक सहनशीलताको निर्माण गर्न सक्छ; यसैले, सबै भन्दा राम्रो काम गर्न को लागी Sunifiram चक्र चलाउन को लागी ब्रेक छ।
एक Sunifiram स्ट्याक Sunifiram को एक संयोजन एक साथ एक या अधिक nootropic पूरक के साथ एक साथ ले लिया या एक अनुक्रम में अधिक संज्ञानात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए। सनफिरमले मात्र लेवलले स्वलोभन फाइदाहरू प्रदान गर्दछ तर यसलाई कुनै नोटोट्रिकको साथमा स्ट्याक गर्दैछ कि फाइदाहरू बढ्दै जान्छन्। यद्यपि, सुनीफिरम खुट्टाको बारेमा सावधान हुनुपर्दछ कि तपाईले अरू नोट्रोपिक्ससँग संयोजन गर्न निर्णय नगरेसम्म तपाई तिनीहरूप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया थाहा नगर्नु हुन्छ।
मूड वृद्धिको लागि
यहाँ विभिन्न नोटोप्रोक्सहरू छन् जुन सुनीफिरमसँग राम्रो ढोकाहरू खराब मूड समस्याहरू समाधान गर्न।
L-theanine- यसले GABA, serotonin, र dopamine को उत्पादन को प्रचार गरेर काम गर्छ। यसले ग्लोटामिन रुकुपलाई पनि रोक लगाउँछ।
सुल्बुतिमीइन- यसले ग्लुटेमेटर्जिक, डोपिनियमर्गेनिक र क्लोनर्जिक ट्राफिक पोटेन्टियन्ट गर्दछ।
एक राम्रो कोलोन स्रोत समावेश गर्न को नबिर्सनुहोस् जुन एक potentiator को रूपमा कार्य गर्नेछ र तपाईंलाई सिर दर्द र अन्य दुष्प्रभावहरूबाट रोक्न सक्दछ।
संज्ञानात्मक प्रभावहरूको लागि
यो सुनीफिरम स्ट्याक स्ट्याकको सामान्य प्रकारको हो। बढेको संज्ञानात्मक प्रभावको लागि, सुनीफिरम सामान्यतया racetam परिवारबाट एक वा बढी नोट्रोपिक्ससँग स्टक गरिएको छ जस्तै नोपपिप्ट, ओक्सिरैसेटम, र पिराकुतम। चूंकि रेकसेटम मस्तिष्कमा कोलोन स्तर को कम गर्न जानिन्छ, एक राम्रो कोलिन स्रोत जस्तै अल्फा GPC, centrophenoxine या सीडीपी कोलेन सिफारिश गरिएको छ।
सनफिरम को साइड इफेक्ट क्या हो
सबैको साथ सबै तरिकाहरू खोज्दै उनीहरूले उनीहरूको प्रदर्शन सुधार र समग्रमा भलाइ गर्न सक्दछन्, धेरैले उनीहरूको स्वास्थ्यमा बिरामीको प्रभावको कारण छन् कि खुराकहरूको लागि बिस्तारै छन्। कोहीले स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्, जबकि अरूले शरीरलाई पूर्ण रूपमा घटाउन सक्थे। तपाईले बिना छोडेर फायदाहरूको आनन्द लिने सबै भन्दा राम्रो नोटोट्रिक सिन्फिरम हो।
अहिलेसम्म, कुनै पनि सुनीफिरममा गम्भीर दुष्प्रभावहरू रिपोर्ट गरिएको छ, तर यो ध्यानमा राख्नु राम्रो छ कि मानव अध्ययन र क्लिनिकल परीक्षणहरू अहिलेसम्म गरिएको छैन। जनावरहरूमा अनुसन्धान गरियो कि यो नोटोप्रोक दुवै सुरक्षित र राम्रो सहनशीलता हो। यो पनि थाहा छ कि निर्धारित एक भन्दा उच्च खुराक पनि मा, यो विषाक्तता को जोखिम को मुद्रा गर्दैन।
सबै सुनीफिरम साइड इफेक्ट्स जुन रिपोर्ट गरिएको छ सानो नै छ र लगभग चाँडै टाढा जान्छ। ती एक शरीरको तापमान, वृद्धि वृद्धि, र उत्प्रेरणामा वृद्धि समावेश गर्दछ। यो पनि सिरदर्दको कारण हुन सक्छ, अडियो र भिजुअल उत्तेजना, निकास भत्कियो र अनिद्रालाई संवेदनशीलता बढ्छ।
यी Sunifiram साइड इफेक्टहरू जब एक धेरै उच्च Sunifiram खुराक लिन्छ वा यसलाई अन्य पूरक संग जोड्न को वृद्धि को रिपोर्ट गरिएको छ। यदि तपाइँ सिफारिस गरिएको खुराक लिनुहुन्छ भने, तपाइँलाई उल्लेख गरिएको साइड इफेक्टहरूबाट पीडित गर्न सम्भव छैन। जब पनि तपाईले टाउकोको दुखाइमा पिडा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तपाईले अल्फा जीपीसीलाई फर्काउनु पर्छ।
सनफिरम कसले प्रयोग गर्न सक्छ
Sunifiram को लागि एकदम सही छ;
विद्यार्थीहरूलाई धेरै जानकारी सिक्न र राख्नु आवश्यक छ।
मानिसहरू जुन नयाँ कार्यक्रमहरू पढिरहेका छन्, यद्यपि, कम्प्यूटर प्रोग्रामरहरू र ती जुनहरू जसले वेब डिजाइनरहरू जस्तै उभरिरहेको प्रचलनको बारेमा जान्न चाहन्छन्।
ईन्जिनियर र टेक्नीशियन जसको नौकरी को आवश्यकता हो कि एक रचनात्मक र एक तेज समस्या समाधान हो
जो मान्छे निरन्तर र योग्य रहन धेरै पढ्न आवश्यक छ
लेखमा देखा पर्यो, सुनीफिरम नोटोट्रिकको प्रकार हो जुन तपाईंको शरीरको आवश्यक्ता पूरा हुनेछ। जब यो सुरक्षा आउँछ, यसले यो लोडमा छ; सबै पछि, यो साथ आउँदैन साइड इफेक्ट यसले तपाईंलाई लिनुपर्यो डाक्टरलाई देख्न सक्छ। तपाईले गर्नु भएको एउटा मात्र चीज यसको साथ संयोजन गर्न सही नोटोट्रिक चयन गर्न र सही समयमा सही रकम प्रयोग गर्न छ। तपाईंको आजको लागि अर्डर र तपाईंको शारीरिक र संज्ञानात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
Phosphotransferases - अनुसन्धान र आवेदन मा अग्रिम: 2013 संस्करण, पृष्ठ 16-30
अम्पाकिन: एपाकिन, सीएक्सएक्स्युमएक्स, आइडिया-एक्सएनमक्स, लि-एक्सएनएमएक्स, एरिरासिटिम, पेपा, फ्याम्पमेटर, सीएक्स-एक्सएनएक्सएक्स, यूनिफिराम, सुनीफिरम, सामान्य पुस्तकहरु, पृष्ठ 717-21
रोभिंग मन: संज्ञानात्मक वृद्धि को लागि एक आधुनिक दृष्टिकोण, एंथोनी सिमुला द्वारा।
2019-10-30 12 मा: 57 बजे
नमस्कार! मलाई तपाईको लेखन यति धेरै मन छ! अनुपातमा हामी AOL मा तपाईंको पोष्टको बारेमा अतिरिक्त पत्राचार राख्छौं? मलाई मेरो समस्याको समाधानको लागि यस ठाउँको विज्ञ चाहिन्छ। हुनसक्छ त्यो तिमी नै हो! तपाइँलाई पियर हेर्न अगाडि हेर्दै हुनुहुन्छ।